Home Business Local Page 56
Daw Aung San Suu Kyi's Ministry of Foreign Affairs dismissed the 2020 Trafficking in Persons (TIP) Reported, which continues to place Myanmar on Tier3List, issuingastatement on July 8, which claimed that the report fails to reflect significant steps taken by the Myanmar government last year...
The Union Tax Law of 2019 lowered taxation on unassessed income. Then the government announced that car owners need to register their cars and pay taxes to obtain legal ownership of their vehicles. In the three months since October 1, some 10,000 car owners have visited the Department of Road...
Govt Takes Back Over 1 Million Acres of Land
by Tin Mg Oo From the 1990s to January 2018, the government grantedatotal of 23 million acres of land for business and investment purposes. It has since taken back over 1 million acres as those who had been granted the lands were not using them, according to a...
Commodity distribution allowed to prevent price fluctuation
(English summary below) စားသောက်ကုန်များ ဈေးမြင့်တက်မှုမရှိစေရန် ဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းအား ဆက်လက်လည်ပတ်ခွင့်ပြု အခြေခံစားသောက်ကုန်နှင့်လူသုံးကုန်များ ပြတ်လတ်ခြင်း၊ ကုန်ဈေးနှုန်းမြင့်တက်မှုမဖြစ်ပေါ်ရန် အဆိုပါ ကုန်ပစ္စည်းများ ဖြန့်ဖြူးရောင်းချနေသည့်ကုမ္ပဏီများနှင့် လုပ်ငန်းရှင်များကို ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ဖြန့်ဖြူးခြင်းများ တားမြစ်ထားခြင်းမရှိကြောင်း စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ဧပြီ ၂၄ ကထုတ်ပြန်လိုက်သည်။ ထိုသို့ ကန့်သတ်ထားခြင်းမရှိသော်လည်း ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်ရောင်းချဖြန့်ဖြူးသူများသည် ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန၏ စံသတ်မှတ်ချက်နှင့် အညီစစ်ဆေးမှုခံယူပြီးမှသာ လုပ်ငန်းကို ပုံမှန်လည်ပတ်ခွင့်ပြုမည်ဖြစ်ပြီး ယင်းသို့ စစ်ဆေးမှုခံယူထားကြောင်း အသိပေးရမည်ဟု အဆိုပါ ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။ ယင်းပြင် ပြည်ပမှ တင်သွင်းသည့် ကုန်ပစ္စည်းများအဆင်ပြေချောမွေစွာတင်သွင်းနိုင်ရန်အတွက်လည်း သက်ဆိုင်ရာအစိုးရအဖွဲ့အစည်းများ၊လုပ်ငန်းရှင်များနှင့် စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနတို့ ချိတ်ဆက်၍ ဖြေလျော့မှုများ ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိကြောင်း အဆိုပါထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။ ထိုပြင် covid -19 ကြောင့် ပြည်တွင်းဈေးကွက်အတွင်း အခြေခံစားသောက်ကုန်နှင့်...